Wayfair dia nanala ireo fironana momba ny tranon-trano avo indrindra niroso tamin'ny fandroahana lakozia manerana an'i Etazonia
BOSTON– (BUSINESS WIRE) –Wayfair Inc. (NYSE: W), iray amin'ireo toeran-tserasera lehibe indrindra an-trano ho an'ny trano, androany dia namoaka ny fironana an-tampon'ny Housewares rehefa miantsena ny fifidianan'ny orinasa ny tabilao, ny herinaratra kely, ny fitaovana ary maro hafa. Miaraka amin'ny safidy an'arivony avy amin'ny l ...
Indostria momba ny fanaka an-trano ao Hong Kong
Hong Kong dia ivotoeram-panovozana malaza eran'izao tontolo izao ho an'ny vokatra ao an-trano, ao anatin'izany ny kojakoja-latabatra, kojakojan-dakozia, kojakoja fanaovana lakozia / fanamainana eto an-toerana ary kojakoja fidiovana vita amin'ny fitaovana maro karazana. Ho valin'ny fifaninanana henjana avy amin'ireo orinasa sinoa teratany sy aziatika hafa ...
Ny indostrian'ny tranom-bahiny dia nafana be
na aiza na aiza alehany fa any an-trano mandritra ny areti-mandringana dia nitodika tany amin'ny fandrahoana sakafo ireo mpanjifa. Ny fanaovana mofo ao an-trano, ny fandrahoana ary ny fampifangaroana cocktail dia nahatonga ny varotra 25% ho an'ny varotra an-trano tamin'ny taona 2020, araka ny angon-drakitra avy amin'ny The NPD Group. "Nafana dia mafana ny indostrian'ny trano", hoy i Joe Derochowski, ...